ह’त्या हुनुअघि सुजिताले फोनमा भनेकी थिइन्ः कस्तो घरमा विवाह गराइदिएको ? - Public 24Khabar
Home News ह’त्या हुनुअघि सुजिताले फोनमा भनेकी थिइन्ः कस्तो घरमा विवाह गराइदिएको ?
ह’त्या हुनुअघि सुजिताले फोनमा भनेकी थिइन्ः कस्तो घरमा विवाह गराइदिएको ? महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका ७ भ्रमरपुरा घर भएकी सुजिता ठाकुरलाई उनका श्रीमानको घरका परिवारले अर्कै केटासंग भागेको हल्ला चलाए ।
घटना भएको दिन सुजिताले आफ्ना बुवालाई फोन गरेर रुँदै मलाई यस्तो घरमा किन विवाह गरेर दिएको भनिन् । उनले बुवालाई फोन गर्दा पछाडी अरु मान्छे ठूलो स्वरमा बोलेको आवाज पनि सुनिन्थ्यो ।
झ ग डा भएकै बेला उनले बुवालाई फोन गरेकी थिइन् । त्यती नै बेला उनका देवरले पनि सुजिताको वुवालाई फोन गरेर तुरुन्त यहाँ आएर आफ्नी छोरी लैजानु भनेका थिए । तर आधा घण्टा पछि उनै देवरले यहाँ कुरा मिलिसक्यो आउन पर्दैन भने ।
छिनछिनमा कुरा फेरीएपछि सुजिताको माइतीलाई शंका लाग्यो । विहानै छोरीको घरमा पुगे । तर उनका श्रीमान र परिवारका सदस्यले सुजिता अर्कै केटासंग भागेको भने ।
Previous articleदुई महिना अगाडी मात्र बिहे गरेका डा. सुदिप अर्यालले आखिर किन चाले यस्तो कदम ?
Next articleअर्ध*नग्न अबस्थामा, झापा बिर्तामोड कि सिर्जना बस्नेत घर अगाडी नै मृ”त फे’ला Srijana Basnet भिडियो हेर्नुहोस (न्याय का लागि सेयर गराै)